Lahateny fiarahaban'i kardinaly Désiré Tsarahazana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mamelà ahy ianao handray fitenenana, amin’ny anaran’reo rahalahiko Eveka ao amin’ny Fivondronan’ny Evekan’i Madagasikara, mba hirary anao Tonga soa eto amin’ity Nosy lehibe sady mahafinaritra ity. Ny hafaliana sy ny fankasitrahana avy amin’ny ny Eglizy amin’ny endriny maro samihafa, sy avy amin’ny vahoaka malagasy manontolo no ambaran’ny teny aloaky ny vavako androany.
Manitsaka ny tanin’ny ity firenena manankarena amin’ny tantarany, ny kolotsaina mampiavaka azy ary ny fahendrena nolovainy tamin’ireo razana ianao. Mihaona amin’ny vahoaka mivavaka ianao, vahoaka mino an’Andriamanitra mpahary, mino an’ilay Andriamanitra loharanon’aina, ka ao anatin’izany dia manan-kasina ny olombelona. Io fototra io dia harena ka manamora ny fandraisanay ny Evanjelin’i Kristy.
Anisan’ny toetra mampiavaka ny Eglizinay ny firotsahanay handray andraikitra amin’ny fanampiana ireo mahantra noho ireo vahoaka eto aminay izay mahantra ny ankamaroany. Mahavaky fo anay ny kolikoly sy ny tsy fitoviana eo amin’ny mpiara-belona. Mbola mampiahiahy anay mandrakariva ny tsy fisian’ny fandriam-pahalemana. Tsy hainay ny hangina amin’izao ka tsy hihetsika. Ny tsirairay aminay dia afaka manova ny zava-misy ao amin’ny ambaratonga misy azy.
Tsy maintsy mirotsaka an-tsehatra izahay mba “hiahy ilay Trano iombonana” araka ny antso nataonao taminay.
Ry Ray Masina, miray feo amiko ny Eglizy malagasy manontolo mba hisaotra anao noho ny fiahiana pastoraly asehon’izao fitsidihanao izao. Mivantana ao am-ponay ny hafatra mifono fanantenana sy fiadanana omenao ary raisinay ho fanohanana sarobidy sy fankaherezana anay mba hanohy ny fitoriana ilay “Hafalian’ny Evanjely” ao anatin’ny fiombonana aminao.
Mirary fitsidihana apostolika mitondra vokatra izay ataonao amin’ity singan’izao tontolo izao ity izahay, no sady manantitra ny fankasitrahanay feno firahalahiana ary mangataka ny tso-drano avy aminao.
Lahateny nataon'i Papa François teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha :